यस्ता ग’ल्ती गर्नाले आमा बन्ने सुखबाट वञ्चित हुने ड’र – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. यस्ता ग’ल्ती गर्नाले आमा बन्ने सुखबाट वञ्चित हुने ड’र – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
यस्ता ग’ल्ती गर्नाले आमा बन्ने सुखबाट वञ्चित हुने ड’र
आमा बन्नु एक महिलाका लागि सबैभन्दा ठूलो सुख हुन्छ तर आजकालको जीवनशैली र खानपानसँग सम्बन्धित केही बानी महिलामा बाँझोपनका कारण बन्न सक्छ । यसबाहेक शरीरमा हर्मोनल असन्तुलन भएका कारण पनि महिला बाँझोपनको शि’कार हुने गर्छन् । यदि कोही महिला गर्भधारण गर्न अस’मर्थ हुन्छन् तब उनीहरुको मनमा ड’र र आ’शं’का पैदा हुन थाल्छ । शं’का भगाउनका लागि विशेषज्ञबाट महिलाले बाँझोपनको समस्याबाट पार पाउनका लागि के गर्ने भन्ने जानकारी लिऔं ।
विशेषज्ञका अनुसार शरीरमा पोषक तत्वको कमी, शरीरको तौल, शारीरिक वा मानसिक त’नाव, न’शालु औषधीको प्रयोग आदि गर्दा महिलामा प्रजनन क्षमता प्रभावित हुने गर्छ । शोधका अनुसार धु’म्र’पान गर्नु पनि बाँझोपनको महत्वपूर्ण कारण बनिरहेको छ । यसबाहेक गर्भनिरोधक गो’लीको बारम्बार प्रयोग गर्दा पनि गर्भधारणमा स’मस्या निम्त्याउन सक्छ । यी औषधीले शरीरको प्राकृतिक हर्मोनको उत्पादनमा बा’धा निम्त्याउँछ जसले गर्भ’पत’नको ख’तरा बढाउँछ ।
महिलामा बाँझोपनका विभिन्न कारण हुनसक्छन् । यदि कुनै महिलाको फ्यालोपियन ट्युबमा यौ’न रो’ग वा कुनै शल्यक्रियाका कारण सं’क्रमण हुन्छ भने यसले गर्भधारणको सम्भावना कम गर्ने गर्छ ।
यसबाहेक एन्डोमेट्रियोसिस (त्यो स्थिति जसमा महिलालाई महिनावारीका बेला अत्यधिक पी’डा हुनु) महिलामा बाँझोपनको सबैभन्दा सामान्य कारणमध्ये एक मानिन्छ । आजकालको व्यस्त जीवनशैलीलाई मध्यनजर गर्दै त’नावमा हुनु पनि साधारण हो । यस्तोमा त’नावमा महिलामा बाँझोपनको कारण बन्न सक्छ ।
पिसिओएसका कारण पनि धेरैजसो महिला बाँझोपनको शि’कार भइरहेका छन् । यो रोग लाग्दा फ्यालोपियन ट्युबमा सिस्ट बन्ने गर्छ जसका कारण महिलाले गर्भधारण गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । यो विकारमा अ’ण्डाशयलाई अण्डाको उत्पादन गर्नबाट रोक्छ र ४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलामा एस्ट्रोजेन हर्मोन उत्पादन पनि कम गर्छ । यसबाहेक मोटोपना र अनियमित महिनावारी पनि महिलामा बाँझोपनको कारण बनिरहेको छ । विशेषज्ञका अनुसार महिला आफ्नो जीवनशैलीमा केही परिवर्तन गरेर इनफर्टिलिटीबाट बच्न सकिन्छ । आउनुहोस्, यसबारे जानकारी लिऔंः
म’द्यपान र धु’म्र’पानले पनि महिलाको प्रजनन क्षमता प्रभावित गर्छ । त्यसैले महिलाले र’क्सी, चु’रोट नखान सल्लाह दिइन्छ ।
बाँझोपनबाट बच्नका लागि महिलाले त’नावरहित हुन निकै आवश्यक छ । नियमित रुपमा योगा, ध्यान र व्यायाम गर्दा पनि यो सम’स्याबाट पार पाउन मद्दत गर्छ । शरीरको कम तौल र मोटोपना पनि महिलामा ओभुलेसन विकार अर्थात् बाँझोपनको कारण बन्न सक्छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको April 3, 2021 April 3, 2021 146 Viewed